नेपालमा थप तीनजना कोरोना सङ्क्रमण, कूल सङ्क्रमित ४५, सातजना निको « Mechipost.com
नेपालमा थप तीनजना कोरोना सङ्क्रमण, कूल सङ्क्रमित ४५, सातजना निको
प्रकाशित मिति: १० बैशाख २०७७, बुधबार २१:१३
फिदिम । नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको संख्या बढेर ४५ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधवार जनाएको छ ।
“धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको नमुना जाँचमा थप तीनजनामा सङ्क्रमण पाइएको छ” मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बताए । बुधवार पत्ता लागेका सङ्क्रमितहरू २४ वर्षीय, ६० वर्षीय र ७२ वर्षीय पुरुष रहेको बताइएको छ ।
हाल क्वारन्टीनमा बसिरहेका उनीहरूलाई विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा लगिने डा. देवकोटाले बताएका छन् । ती तीनजना सुरुमा उदयपुरमा सङ्क्रमित भेटिएको १२ जनाको टोलीसँगै रहेकाहरू भएको प्रादेशिक अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
“उनीहरूलाई सुरुमा सङ्क्रमण नदेखिएपनि क्वारन्टीनमा अनि त्यसपछि धरानको अस्पतालमा पठाइएको थियो । अहिले उनीहरूमा पनि सङ्क्रमण भेटियो” प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले भने । यो सहित उदयपुरमा मात्रै सङ्क्रमितहरूको संख्या २७ जना पुगेको छ ।
सातजना निको भए
देशभर कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितमध्ये सातजना निको भइसकेको प्रवक्ता देवकोटाले बताएका छन् । मङ्गलवार र बुधवार गरी सेती अस्पताल कैलालीबाट दुई जना अनि बुधवार टेकु अस्पतालबाट एकजना डिस्चार्ज भएको उनले बताए । साथै बुधवार सङ्क्रमित पाइएका तीनजना सहित हाल सबै सङ्क्रमितको अवस्था सामान्य रहेको डा. देवकोटाले जानकारी दिएका छन् । (बीबीसी नेपालीबाट ।)